Aragtiyo kaladuwan oo laga baxinayo isa soo dhiibidda Abu Mansoor Robow - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Mukhtar Robow Ali oo xarakada Al-shabab u taqaan Abu Maansoor oo shalay shir saxaafadda ugu qabtay magaalada Mogadishu. sawir: MOHAMED ABDIWAHAB TT
Aragtiyo kaladuwan oo laga baxinayo isa soo dhiibidda Abu Mansoor Robow
" Waxa ay aheyd in la maxkamadeeyo"
La daabacay onsdag 16 augusti 2017 kl 16.10
Magaalada Mogadishu huteel ku yaala shalay waxaa shir-saxaafadeed ku qabtay Mukhtaar Roobow Cali oo ku magac dheer Abuu Mansuur, kaas oo dhanwaantaan isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya.
Abuu Mansuur waxa uu shir-saxaafadeedkaan oo uu tabinayey telefishinka dowladda Soomaaliya SNTV ka sheegay in uu iskaga baxay muddo shan sanno iyo todobo bilood laga joogo Jabhadda Al-shabaab oo uu ka mid ahaa dadkii wax ka aas’aasay marna k soo noqday hoggaamiye ku xigeenka kooxda.
- In aan ka baxay ururka Al-shabaab xubinnimadii aan ka ahaa muddo laga joogo shan sanno iyo todobo bilood. sababta aan uga baxayna ay tahay kala duwanaan fahan iyo qilaaf caqiido.
Ururada xaquuqul insaanka
Bayaan ka soo baxay isla shalay ururka xaquul insaanka u dooda ee Human right Watch waxaa lagu sheegay in sharciga caalamiga ah aysan banaanayn in magangelyo la siiyo ruux ku kacay falal xad gudbyo dhanka xaquul insaanka. Iyadoo oo Human Right Watch ku eedeysay Abuu Mansuur intii uu ka tirsanaa hoggaanka sare ee Al-shaabab inay geysteen xadgudubyo dhanka shacabka, isla markaana xoog ku askareeyeen carruur. Ururka ayaa dowladda ugu baaqay inay baaran xadgudubyadii Abuu Mansuur geystay.
Aragtida soomaalida Sweden
Soomaalida Sweden ayaa isa soo dhiibidda Abuu Mansuur beryahan hadal haysa iyada oo dadka aragtiyo kala duwan ka bixinayaan.
Dadka qaar ayaa saluugsan in dowladda Soomaaliya Magangeliyo siiso Abu Mansoor. Waxaa ka mid ah Xussien Abdulkadir oo ku nool magaalada Göteborg.
-Arrinka layaabay waxa weeye, markii dowladda Soomaaliya ninkaas u soo gacan-galay oo calanka Soomaaliya ku sawireen halka uu awal calankaas u haystay mid aan umadda Soomaaliya matelin. Waa arrin aad looga xumaado in dowladda Soomaaliya ninkas nooga dhigto nin wanaagsan, ayuu yiri.
Waxaa se jira dad taageersan in dowladda Soomaaliya magangeliyo siiso Abuu Mansuur, dadka waxaa ka mid ah Abdijibaar Maxamed oo ku nool Färjeland oo ka tirsan gobolka Väst-Götland. Abdijibaar Maxamed ayaa aaminsan isa soo dhiibidda ninkan in ay waxtar u leedahay xasiloonida iyo nabadda.
- Waa arrin wanaagsan oo ay dowladdu ku xalin karto nabadda iyo xasiloonida dalka, ayuu yiri Abdijibaar Moxamed.
Xussien Abdulkadir ayaa asagu doonaya in Mukhtaar Roobow la maxkamadeeyo oo lagu soo oogo dambiyadii uu dadka iyo dalka ka gaystay.
- Sida sharciga soomaaliya iyo kan caalamkuba yahay waxaa fiicnaan laheyd ninkan in maxkamad la horgeeyo wuxuu dambi galayna uu abaalkeeda helo haddii ay macquul tahay, sida uu sheegay Xussien Abdulkadir.